Raha ny fantatra, dia tokony ho tamin’ny folo ora alina no nitrangan’ny halatra. Nampandre ny zandary tao Tambohorano ny ben’ny tanàna Andranovao. Vokatr’izay, dia omby miisa 60 no indray lasan’ireo andian-dahalo manodidina ny folo nitondra basim-borona. Nanara-dia avy hatrany ny mpitandro ny filaminana sy ny fokonolona ary namonjy ny kizo tao Marovava niandry ireo malaso, ireo mpanara-dia. Fotoana fohy taorian’izay, dia tonga ireo dahalo niaraka tamin’ny omby halatra. Nisy ny fifandonana teo amin’ny roa tonta, ka rifatra nandositra ireo malaso, rehefa tsy naharesy tosika ny zandary sy ny fokonolona nanara-dia. Navelany teo ny omby halatra ary efa tafaverina tamin’ny tompony ireo biby ireo, araka ny vaovao azo farany.